Akukho Ukugcinwa Kwezindlu? Awekho amasevisi? Yenza uhambo lube luhle futhi!
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika » Akukho Ukugcinwa Kwezindlu? Awekho amasevisi? Yenza uhambo lube luhle futhi!
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Health News • Industry Hospitality Industry • Investments • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
I-World Tourism Network namuhla ifake iphepha lokuma futhi yaxwayisa ngokuthi izinsizakalo zokusika zizokwehlisa ijubane noma zime ngisho nokwakhiwa kabusha okudingeka ngokushesha komkhakha wezokuvakasha nezokuvakasha.
I-World Tourism Network iyaqonda ukuthi esikhathini seCovid, izindiza, ezinye izindawo zokudlela kanye namahhotela kuye kwadingeka zinciphise izinsiza ukuze ziphile.
Ngeshwa, ngalesi sikhathi, sibone umhlaba wonke wehla ngekhwalithi yomkhiqizo wezokuvakasha onikezwa umphakathi.
Eposini umhlaba we-COVID-19 lokhu kungasho ukuthi ukuheha kohambo kuyasuswa igxathu negxathu, okwenza kube nzima ukubuyela emuva.
The Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba inxusa abaholi bemboni ukuthi benze ukuvakasha kube mnandi, kujabulise, futhi kukhange futhi.
Ukunciphisa ukugcinwa kwezindlu nokunganikezi ezinye izinsizakalo zokonga izindleko kuzonciphisa noma kumise ukwakhiwa kabusha komkhakha wethu wezokuvakasha nezokuvakasha.
Labo abazoheha izivakashi ngokumomotheka nezinsizakalo ezinhle yibo abazowina.
Ukuhambela kumele kube kuhle futhi!
”Umhlaba kuzofanele ubambisane ne-COVID-19. Ithuba lokubuyisa ezokuvakasha nezokuvakasha libuyele emazingeni ka-2019 futhi lenze ukuthi lungabi luhehe kangako, lube mnandi, noma lube lukanokusho lokuthatha uhambo alunamiphumela ”kusho uJuergen Steinmetz, onguSihlalo weWorld Tourism Network.
”Labo abazothuthukisa futhi banganciphisi izinsizakalo bazoba ngabanqobi abakhulu. Izindlela zokusika imali zizohambisana nemiphumela yokusika ibhizinisi.
“Sikhuthaza amahhotela ukuthi aqhubeke nezinsizakalo zokugcinwa kwezindlu, agcine izindawo zokudlela nemigoqo evulekile, futhi angakhohlwa ukwenqaba izinsiza ngokumamatheka!”
I-WTN ifuna ukukhuthaza ababambiqhaza ukuthi basebenze kukho ukujabulisa kabusha ezokuvakasha emhlabeni ngethemba lokuthi ngemuva kwezinsizakalo. Abahambi bafuna ukutotoswa, ukuhamba kufanele kube mnandi, kungabi nengcindezi, futhi banikeze ngezinsizakalo ongazitholi lapho uhlala ekhaya.
Yenza ukuvakasha kube kuhle futhi:
Buyisela ukuhlanzwa kwamakamelo okuvamile nokushintsha okokulala emahhotela nasezindaweni zokungcebeleka.
Thuthukisa insizakalo etholakala ezinkampanini zezindiza futhi uqede izimali eziningi.
Thuthukisa amahora asebenziseka kalula kubahambi.
Ungazami ukuba yizinto zonke kubo bonke abantu.
Inhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba, uDkt. Peter Tarlow uthumele okulandelayo ukubeka iphepha kuwebhusayithi yeWTN.
Ngeshwa, ngalesi sikhathi, sibone umhlaba wonke wehla ngekhwalithi yomkhiqizo wezokuvakasha onikezwa umphakathi. Impela, ingxenye yesizathu salokhu kwehla kube wubhadane. Ubhadane kungenzeka lungabi ukuphela kwesizathu salokhu kwehla. Abaqapheli abaqaphelayo bezindawo zokuvakasha nezokuvakasha base bevele bebona ukuqala okungenzeka kokuthambekela okuphansi ngaphambi kwalolu bhubhane futhi lokhu kwehla kwekhwalithi yensizakalo ngokuhamba kwesikhathi kuzolimaza imboni yezokuvakasha.
Izizathu ezibalulwe ngalokhu kwehla kwekhwalithi yokuhlinzekwa kwamakhasimende kusuka ezindlekweni eziphakeme zikaphethiloli kuya ekuwohlokeni komnotho emazweni amaningi asentshonalanga. Yize lezi zizathu zivumelekile futhi ziyiqiniso, zinikeza ingxenye yendaba kuphela. Ngaphezu kwalokho, ngokubuka komkhakha wezokuvakasha kanye nezokuvakasha, kuyizizathu ezingenzi lutho: izinto ezenzeka embonini. Uma imboni yezokuvakasha nezokuvakasha izophumelela kulezi zikhathi ezinzima, kufanele yenze okungaphezulu kokuzibona nje ukuthi iyisisulu somnotho noma ububi babanye abantu nayo kumele izihlole ukuze ibone ukuthi nayo ingathuthuka kuphi.
Mhlawumbe usongo olukhulu embonini yezokungcebeleka (futhi kancane embonini yezokuvakasha ngezebhizinisi) iqiniso lokuthi uhambo lwalulahlekelwe kakhulu uthando lwalo nobungoma. Ekuqhubekeni kwayo kokusebenza kahle nokuhlaziywa kobuningi, imboni yezokuvakasha nezokuvakasha kungenzeka ukuthi ikhohliwe ukuthi umhambi ngamunye umele umhlaba kuye, futhi ikhwalithi kufanele njalo ibhale ubuningi.
Ikakhulukazi embonini yezokuvakasha yokuzilibazisa, lokhu kungabi namlingo kusho ukuthi zimbalwa futhi zimbalwa izizathu zokufuna ukuhamba nokubamba iqhaza kwezokuvakasha.
Ngalesi sizathu, iWorld Tourism Network inxusa imboni ukuthi:
Buyisela ukuvuselelwa kwegumbi njalo nokushintsha okombhede
Ukwenza ngcono insizakalo etholakala ezinkampanini zezindiza nokuqeda izimali eziningi
Thuthukisa amahora asebenziseka kalula kubahambi
Ukungazami ukuba yizinto zonke kubo bonke abantu.
Dala ubuciko ngokusebenzisa ukuthuthukiswa komkhiqizo. Khangisa okuncane futhi unikeze okuningi.
Uma ezokuvakasha zizolulama ekungabibikho kwebhizinisi ngonyaka odlule nohhafu kuzofanele ithole izindlela zokweqa okulindelwe futhi ingalokothi yeqe icala lakho. Indlela enhle yokumaketha ingumkhiqizo omuhle kanye nensizakalo enhle. Imboni yezokuvakasha kumele inikeze lokho ekuthembisayo ngamanani anengqondo.
Imboni yezokuvakasha kumele yakhe indawo ephephile nephephile. Kungaba nentelezi encane uma abantu besaba. Amabhizinisi kanye nemiphakathi ebhekele ezobungcweti bayabona ukuthi wonke umuntu unendima angayidlala ekwakheni isipiliyoni esihle sezokuvakasha nesidala indawo eyingqayizivele nekhethekile hhayi eyabavakashi kuphela kodwa neyamabhizinisi ezokuvakasha kanye nemiphakathi.
UDkt Peter Tarlow
Ukuphumula Komphathi uthi:
Okthoba 22, 2021 ku-09: 35
Siyabonga ngokuthunyelwe okuhle kakhulu. Ngiyethemba uzoqhubeka nalezi zihloko. Ngikufisela impumelelo. Ngiyabonga
[url = https: //aranice.com/ ”] دردشة عراقية [/ url]
[url = https: //i2m3.com/ ”] شات ذهب [/ url]